एक हातले साइकल चलाएर काठमाडौंबाट वीरगञ्ज (भिडिओ) :: सबिना श्रेष्ठ :: Setopati
राम अधिकारी। तस्बिरः सबिना श्रेष्ठ/सेतोपाटी
राम अधिकारीलाई द्रुत गतिमा साइकल चलाउन मन पर्छ।
एकदिन गौशाला नजिकै भर्खर बनेको कच्ची बाटोमा उनी साइकल चलाइरहेका थिए। सँगैको स्कुटरलाई जित्ने हुटहुटीमा बत्तिए। त्यही बेला स्कुटर 'डिस्ब्यालेन्स' भयो। राम भित्तामा ठोकिए र बेहोस भए।
अहिले यो घटना सम्झँदा रामलाई हाँसो लाग्छ। उनी त पहिल्यैदेखि एक हात बिनै साइकल चलाउने 'पारा साइकलिस्ट' जो हुन्। जसको हात–खुट्टा छैन तर पनि खेलकुदमा सक्रिय छन्, उनीहरू पारा खेलकुद अन्तर्गत पर्छन्। साइकल यसैमध्येको एक विधा हो।
जति उनी त्यो दुर्घटनाको दिन सम्झिएर हाँस्छन्, आफ्नो हात गुमाएको दिनको सम्झनाले झस्किन्छन्।
बुवा भारतमा काम गर्नु जानुअघि भनेका थिए, 'मिल धेरै चलिरहँदा तातेर पड्किन्छ। यसैले छिनछिनमा बन्द गर्दै चलाउनुपर्छ है।'
त्यही सोचमा काठमाडौं त ल्याए, तर त्यो बेला उनको अवस्था देखेर डाक्टरले भनिदिए, 'उपचारका लागि मन्त्रीको सिफारिस चाहिन्छ।'
दार्जिलिङतिर रामका हजुरबुवा र काकाहरू बस्थे। उनीहरूले उतै बोलाए र उपचार गरे। तर धेरै ढिला भइसकेकाले हात जोड्न पाएनन्।
त्यो दिन सम्झँदा उनलाई अझै लाग्छ, 'त्यो बेला समयमै उपचार गर्न पाएको भए...'
'कसरी चलाएको? तिमीले त चलायौ, हामी पनि सक्छौं भन्दै प्रेरित हुँदै जानुभयो,' रामले भने, 'यस्ता प्रतिक्रियाले हौसला मिल्छ।'
कसैले भने होच्याउँदा पनि रहेछन्, 'एउटा हातले साइकल चलाएर के फूर्ति लगाएको!'
'उकालो–ओरालोमा ह्यान्डल गर्न सिकेँ, एकै दिनमा,' उनले भने।
'त्यो साथीसँग मैले पैसा लिनुपर्ने थियो। १२ पढ्न काठमाडौं आउनेक्रममा मैले पैसाको सट्टा साइकल नै लिएँ,' उनले भने।
कमलाक्षीस्थित उक्त पसलमा पुगेर साइकल बनाउदा उनीसँग पुग्दो पैसा थिएन। तिरेकले त्यो कुरा वास्ता गरेनन्। पछि आउँदा–जाँदा उनीसँग नजिकिए। अहिले उनी प्यांकबाटै 'स्पोन्सरसिप'मा साइकल चलाउँछन्।
रामले चलाउने साइकल अलि भिन्न छ। साइकलबारे बताउँदै प्यांकका सञ्चालक तिरेक भन्छन्, 'पहिला रामले चलाएको साधारण फलामको साइकल थियो। अहिले कार्बनको हलुका साइकल चलाउँछन्। उनका लागि हाम्रै मेकानिक सुजित कुमारले परिमार्जन गरेर दुवै ब्रेक देब्रे हातमा राखिदिएका छन्। यसपछि उनले झनै सजिलो गरी साइकल चलाउन थाले। हामीले उजस्तै मान्छेलाई सकेसम्म साइकलमा सहयोग गरिरहेका छौं।'
साइकल लेन भने सबै ठाउँ भइदिए दैनिक यात्रा गर्न सजिलो हुने बताउँदै भन्छन्, 'नेपालमा साइकलका लागि लेन बनाउनु ठूलो क्रान्ति हो। हाम्रो त अधिकारकै कुरा पनि हो।'
साइकल चलाएरै विभिन्न ठाउँ पुगिसके राम। उनको परिचय पारा साइकलिस्टमा मात्रै सीमित छैन, उनी पारा तेक्वान्दो खेलाडी पनि हुन्।
विशालनगरमा डेरा बस्दा उनी ताहचलस्थित महेन्द्र रत्न क्याम्पस साइकलमै जान्थे। जहिल्यै क्याम्पस जाँदा रंगशाला छिर्थे। त्यही बेला उनको भेट प्रशिक्षक अशाेक खड्कासँग भयो। तिनै प्रशिक्षकको हौसलामा पारा तेक्वान्दो खेलिरहेका छन्।
कमलाक्षीमा एक्लै भाडामा बस्ने राम आफ्ना घरायसी काम आफैं गर्छन्। दिँउसो कुपन्डोलस्थित सामाजिक काम गर्ने 'परिचय समाज'मा काम गर्छन्। कोरोनाका कारण उनको बिहानको तेक्वान्दो तालिम भने छैन।
उनीजस्तै पारा तेक्वान्दो र साइकल चलाउने सिर्जना घिसिङ, रञ्जना धामी, विशाल गरबुजा लगायत छन्। उनीहरूलाई रामले नै हौसला दिँदै आएको बताउँछन्।
'हामी जस्ता मान्छे हातको औंलामै गन्न सक्ने हुनुहुन्छ। मजस्तै साथीलाई अरूले गिज्याउँछन् भनेर लुकेर नबस्न आग्रह गर्छु,' उनले भने, 'झन् उहाँहरूलाई खेलमा लाग्न भन्छु। आफ्नो शरीरलाई पनि फाइदै हुन्छ।'
पारा तेक्वान्दो र साइकलबाट नाम बनाइसकेका राम आफूजस्तै भाइबहिनीलाई भविष्यमा तालिम दिन चाहन्छन्। उनको अर्को चाहना पनि छ, ओलम्पिक खेल्ने।
भन्छन्, 'तेक्वान्दोबाट ओलम्पिक जाने मन छ। त्यहाँबाट पूरा भएन भने साइकलबाट हुन्छ कि?'
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १८, २०७७, ०६:३९:००